Shipping - Shenzhen King Fu Color Printing Co., Ltd
Fandefasana General Information
Fa nandefa boky an-dranomasina avy any Shenzhen, azafady mamela ny habetsaky ny fotoana manaraka ny nandeha sambo, fanao fangatahany fahazoan-dalana, sy ny any afovoan-tany trucking ny trano fanatobiana entana.
To Etazonia / Kanada toerana: 3 ka hatramin'ny 6 herinandro miankina amin'ny andrefana (LA, Vancouver) na ny atsinanana vidin'ny (NYC, Toronto)
To Asia toerana: 1 ny 2 herinandro
To UK sy ny Eoropeana toerana: 4 ka hatramin'ny 6 herinandro
To Aostraliana toerana: 2 ho 3 herinandro
To Africa firenena: 4 hatramin'ny 8 herinandro
To Amerika Atsimo toerana: 5 ho 7 herinandro
Afaka manome safidy fandefasana entana maro azo isafidianana: Ek-asa, FOB Shenzhen, CIF Destination seranan-tsambo, isan-Door Delivery sy Air entana.
Mpanjifa mitsimpona tao aminay orinasa, ary manaova fotoana ny zava-drehetra avy any Shina ny firenena amin'ny alalan'ny ny mpiasa.
FOB Shenzhen (Free amin'ny Board)
Consignments dia natolotra ho amin'ny Dock ao Shenzhen ho an'ny mpanjifa izay manao ny sambo, fanao fangatahany fahazoan-dalana, ary ny afovoan-tany fanaterana fandaharana.
CIF Port (Cost, Insurance & entana)
isika manaova fotoana mba azo antoka consignments sambo ho any amin'ny seranana teny voatondro. Mpanjifa mandamina fomba amam-panao sy ny afovoan-tany fahazoan-dalana amin'ny alalan'ny fanaterana ny mpiasa.
isika manaova fotoana mba an-tsambo azo antoka consignments isan-trano avy any Shenzhen ny farany toerana. Izany asa fanompoana dia ahitana fomba amam-panao sy ny any afovoan-tany fahazoan-dalana lahateny. Adidy sy ny hetra no fanampiny. Boky nalefa ho any amin'ny US tsy manana adidy.
Books azo nalefa fiaramanidina entana, nefa mariho fa ity no lafo vidy safidy. Air entana dia afaka mitondra ny 1 herinandro na mihoatra hamonjy. Ny fandefasana ara-barotra mampiasa fiaramanidina mpanakalo entana entana, izay midika fa ny boky dia hotontosaina amin'ny sidina ara-barotra, ary ny boky, dia ho afaka eo an-toerana avy any amin'ny seranam-piaramanidina kamiao ho any amin'ny toerana farany.
Ny fomba haingana indrindra fa nanolotra boky dia ny mampiasa rivotra iraka, toy ny DHL, UPS na FedEx. Izany no tena lafo, ary tokony hampiasaina afa-tsy ho an'ny zavatra ilaina avy hatrany.